ISBARASHO WACAN !
Ahmed H. Adan
Amuurta Soomaaliya ayaa iminka maraysa meel aad u yaab leh, qof kasta oo si qotodheer ugu fiirsada argagax iyo la yaab galinaysa. Soomaali land iyo Punt land waxaa ka dhacay in dad Soomaaliyeed shisheeye loo dhiibo wixii ka danbeeyay bilowgii dagaalkii argagixisada kolkii Amerika ku dhawaaqday. Ayagoo labada maamulba ay doonayaan in ay ka mid noqdaan isbahaysiga la dagaalanka arga gixisada ujeedo kastaba ha ka lahaadeene, mid dhaqaale, aqoonsi ama kasbasho nooc taageero.
Taas waxaad moodaa in dadka qaarna u riyaaqeen qolana fajac iyo filan waa ay ku noqotay. Halkaa waxaa si markhaati madoontaa uga cadaatay in dagaalkii loo galay tuuridii xukunkii caskariga ahaa ninba meel uwaday oon hal ujeedo laga lahayn, qofkii awal Soomaaliga aahaana noqday qabiil iyo abtirkii. ma waxaan mooganahay in dadka loo dhoofinayo xabsiyada Adis-ababa ay ahaayeen kuwii shalay ku jahaysnaa furashada dhul weynaha Waqooyi Galbeed? mise cid dagaaladii geeska Afrika ka dhacayay moogbaa jirta? isbadal wixii lagu dagaalamay xaliyaa miyaa dhacay?
Mafilayo qofka Soomaaliga ahi in uu ka guul gaaray, inaba ha yaraatee wax aayaa ama qurux ah ooy nolosha geeska Afrika leedahay, balse waa mid sii duloobaya maalinba tay ka danbayso. Qanaacada aan dhabta ahayn ee ay reer Waqooyi iyo maamulka Garawe jilayaana masii cimri dheera, ee miyaysan ku habonayn in arrinta la qunyar socodsiiyo oo jidbada qabiilka bal waxladhimo, markay dhabta tagto lama kala maarmee. Waa mid baahi weyn looqabo in la ilaaliyo xaqa qofka Soomaaligaahi leeyahay bar kasta oo uu kaga sugan yahay dhulka Soomaaliyeed.
Intaa kolkaan ergo Maamulada Waqooyi, Garawe iyo Qab-qablayaasha koonfurta ku sugan ee ficilada noocan ah ku kacay.
Waxaan jeclaan lahaa in aan halkale ergo ummada Soomaaliyeed anoo u noqonaya ciwaankii qormadan "ISBARASHO WACAN" oo ahaa Eray xigmadeed uu yiri Alle ha u naxariistee Jaale Siyaad, kadib burburkii qaran. Waa siduu sheegaye runtii waa lays bartay xaq iyo baadil waa kala cadaaday, ninkii dan ummadeed waday iyo tiisa qunsade la kala barey, tuug iyo wadani kala bexe, qaran iyo qabiil is qaadan waaye, dhagar qabe iyo dhuuni la arag, maan gaab iyo mudane warkood helnay. shalayto iyo macangagnimo waxbatari mayaan ee dib ha loogu noqdo barashada bal waxay ummadani wadaagtro iyo halka masiirkeedu yahay.
Afeef: Argtida qoraalka waxaa leh qoraaga ku saxiixan
Faafin: SomaliTalk.com | Dec 6, 2003
sideed iyo tobanka gobol ee ay Soomaaliya ay Ka kooban tahay,